Sucuudiga Oo $ 500 Bilyan Ku Dhisaya Magaalo Cusub Oo Casri Ah | Dhamays Media Group
Sucuudiga Oo $ 500 Bilyan Ku Dhisaya Magaalo Cusub Oo Casri Ah
Riyaad (Dhamays) – Dalka Sucuudi Carabiya ayaa shaaciyay qorshe uu dalkaasi ku dhisayo magaalo iyo aag ganacsi oo cusub, mashruucaasi oo lagu taageeri doono maalgashi gaadhaya 500 oo bilyan oo doolar.
Dhaxal-sugaha boqortooyada dalkaasi Maxamed Bin Salmaan ayaa sheegaya in magaaladaasi oo laga dhisi doono woqooyi galbeed dalkaasi ay xudduud la yeelan doonto waddamada Masar iyo Urdun.
Wax soo saarka magaaladan ayaa diiradda lagu saari doono farsamada cunnada, tamarta iyo biyaha.
Dhaxal-sugaha ayaa in dhawaaleba waday qorshe uu ku doonayo in Sucuudiga uu ka kaaftoomo ku tiirsanaanta dakhliga ka soo gala saliidda uu dibadda u dhoofiyo.
Bishii Augost ee sanadkan ayaa boqortooyada Sucuudigu waxa ay billowday mashaariic ballaadhan oo lagu horumarinayo dalxiiska dalkaasi, waxaana ilaa 50 jasiiradood iyo goobo kale oo ku yaalla badda Cas ay ka dhistay goobo loo dalxiis tago.
Sucuudigu waxa uu sheegay in mashruucani ay dowladda iyo shirkado caalami ahi ay maalgashan doonaan sanadda soo socda.
Magaaladani ayaa lagu wada in ay noqoto mid isku xidha qaaradaha Aasiya, Afrika iyo Yurub.
Sucuudiga ayaa doonaya in ay ka midho dhaliyaan qorshooda hiigsiga 2030-ka, waxaana ujeeddadiisu tahay sidii loo casriyeyn lahaa isla-markaana loo ballaadhin lahaa dhaqaalaha Sucuudiga.
Dhaqaalaha dalkaasi ayaa hadda ku tiirsan saliidda uu dibadda u dhoofiyo, taa oo sicirkeedu uu hadda hoos uga dhacay kala bardh halkii uu joogay muddo saddex sano ah oo la soo dhaafay.
In arrintaasi xal loo helo ayaa qaadan doonto muddo sanado ah, sidaa awgeedna Sucuudigu wuxuu u baahan yahay in uu u diyaar garoobo xaalad adag oo soo waajahda dhaqaalihiisa.
Dalka Sucuudiga ayaa bilihii la soo dhaafay waday isbeddelo badan oo la doonayo in lagu casriyeeyo dalkaasi.
Bishii la soo dhaafay ayaa boqorka dalkaasi waxa uu soo saaray wareegto uu dumarka ugu ogolaanayo in ay baabuurta kaxeeyaan, arrintaa oo ay soo dhaweeyeen hawl-wadeennada u ololeeya xaquuqda dumarka.
Previous: Maamul-Xumo Iyo Musuqmaasuq Hadheeyey Guddida Dorashoyinka
Next: Wasiiru-dawlaha Madaxtooyadu Miyuu Is-casilay ?